March 11, 2020 - Myitter
ကျောက်ဆည် အထပ်သားစက်ရုံ မီးလောင်မှုသည် ယခုအချိန်အထိငြိမ်းသတ်နေရ ….
ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဥ့်ကိုင်မြို့နယ် ဘယ်လင်း အထပ်သားစက်ရုံ မီးလောင်မှုသည် ယခုအချိန်အထိငြိမ်းသတ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကျောက်ဆည်မီးသတ်ဦးစီးဌာန ကျောက်​ဆည်​ခရိုင်​ ယနေ့နေ့လည် ၁နာရီခန့်မှ စတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့ ဘဲလင်း အထပ်သားစက်ရုံမီး ယခု ည ၉နာရီအချိန်ထိမငြိမ်းသေးပါ မီးထိန်းနိုင်ပြီး ဆက်လက်ငြှိမ်းသတ်ဆဲပါ credit Zin Min Tun unicode version […]
အမွေကိစ္စနှင့်နေအိမ်တွင် စကားများကြရာ သားအဖ သုံးဦး သတ်ပုတ်မှုဖြစ်ပွား
ဒီလိုအဖြစ်တွေလဲရှိတယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဒေါခလိုဒူကျေးရွာတွင် သားအဖ သုံးဦး သတ်ပုတ်မှုဖြစ်ပွား မတ်လ ၁၁ရက် ၊ကယား ၁၀.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၄၂၅ အချိန် ဖခင်လားဆီးနှင့် သားပေတြူတို့ အမွေကိစ္စနှင့်နေအိမ်တွင် စကားများကြစဉ် သားငယ်ဖြစ်သူ မီကေးလယ်မှ ဖခင်နှင့် အကိုဖြစ်သူ ပေတြူတို့ကို အသင့်ကိုင်ထားသောဓားချွန်နှင့် ဝင်ထိုးသဖြင့် ဖခင်မှဘေးရှိ […]
၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ….
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သမီးမရှိပဲ အခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်​​စောင်​ တင်ထားတာကို တွေ့ လိုက်ပါတယ် စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါ ” ချစ်သော ဖေဖေဒီစာကို […]
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယအကြီးဆုံး ကြေးသွန်းခေါင်းလောင်းကြီးအား စစ်ကိုင်းမြို့သို့ သယ်ဆောင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယအကြီးဆုံး ကြေးသွန်းခေါင်းလောင်းကြီးအား စစ်ကိုင်းမြို့သို့ သယ်ဆောင် စစ်ကိုင်း မတ် ၁၁ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ကြေးပိဿာချိန် ၂၀၀၀၀ ခန့်ရှိ အသံထွက် ကြေးသွန်းခေါင်းလောင်းကြီးကို မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်က ခေါင်းလောင်းကြီးပြုလုပ်ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် တံတိုင်းရှည်ကျေးရွာမှ စစ်ကိုင်းတောင်းရိုး၊သိရီသုမနချောင် မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးတွင် […]
မြို့နယ်အလိုက် ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ ရဲစခန်း ဖုန်းနံပါတ်များ…
ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်လာရင် ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ ၁။ ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ရွှေတွင်းကုန်း ရဲစခန်း ဝ၆၇-၇၅၂၃၃ ၂။ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ထုံးဖိုရဲစခန်း ပတ္တာရဲစခန်း ဝ၆၇-၅၀ဝ၁၉၉ …….ဝ၆၇-၄၃၃၀၂၉ ၃။ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ် နေပြည်တော် […]
ဧက ရာနဲ့ခြီ ဖရဲခငျးကွီးတှကေို ပဈပွီးပွနျပွေးတဲ့ တရုတျတှေ ရဲ့နောကျကှယျကဖွဈရပျမှနျ ….
တန့်ဆည် မြို့နယ်ထဲမှာ နှမျောစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ တရုတ် ဖရဲခင်းတွေပါ….. ဝူဟန် ရောဂါပိုးကြောင့် ဖရဲလာစိုက်တဲ့ တရုတ်တွေပြည်ကြီးပြန်ပြေးကြပြီ… ဖရဲသီးတွေ တရုတ်ပြည် ပို့လည်း ဟိုမှာ ဝယ်စားမဲ့ သူ မရှိတော့ဘူး တဲ့အဲ့ဒီတော့ ဆက်ပြီး အရင်းမထည့်တော့ပဲ ဖရဲခင်းတွေ ဒီအတိုင်းထားပြီး ပြန်ကြပြီ.။ဘာ ဗီဇာနဲ့ လာကြလဲတော့ […]
ကိုရိုနာဖြစ်နေတဲ့ အီတလီမြောက်ပိုင်း က ဆေးရုံ ဆရာဝန် တစ်ယောက် ရေးတဲ့စာ…
ပြောပြီးသားတွေ အပ်ကြောင်းထပ် ထပ်ပြောနေတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကပ်ဆိုက်နေသူတွေကို ထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ ဒါမျိး ငါတို့နေရာတွေမှာ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ တွေးနေကြတယ်။ ကပ်ဘေးကင်းနေတဲ့နေရာမှာ ရောက်နေသလို တွေးနေကြတာကို ထောက်ပြချင်တာ။ မီဒီယာကလဲ ကောင်းသွားမှာပါတဲ့။ နိုင်ငံရေးသမားတွေကလဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ ဘာမွ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူးတဲ့ ။ တကယ်တော့ ဘာမှ စိတ်မပူစရာ၊ […]
ကွောကျစရာကောငျးသော ကိုယျတှေ့ ကိုယျ့မကျြစိရှတှေ့ငျ ဖွဈသှားတာ
ကွောကျစရာကောငျးသော ကိုယျတှေ့ ကိုယျ့မကျြစိရှတှေ့ငျ ဖွဈသှားတာ နခေ့ငျးကွောငျတောငျ မန်တလေးမှာ ဆိုငျကယျပျေါကနေ ဆှဲကွိုးဖွတျလုပွေးတာ ၅၇ လမျး မဉ်ဇူလမျးမှာ မိနျးမ ၂ ယောကျ ကလေးတဈယောကျမောငျးလာတဲ့ဆိုငျကယျကို ဘေးကနေ ဆှဲကွိုးဖွတျလုပွေးတာ လုပွေးပွေးခငျြးမှာပဲအဲ့ဒီအမကွီးက အျောလညျးအျော ဆိုငျကယျနဲ့လိုကျလညျးလိုကျ ဒါပမေယျ့လမျးဆုံရောကျတော့ လိုကျတဲ့ဆိုငျကယျက လူကလညျး သုံးယောကျ အရှိနျနဲ့ဆိုတော့ […]
စပိန်နိုင်ငံမှာ… စေတီတွေ တည်ပြီး …ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို …စတင်ကိုးကွယ် နေကြပြီ လူ့တန်ဖိုး ဖတ်ကြည့်နော်… ပညာတွေတတ်ပြီးအကောင်း အဆိုးကို မခွဲခြားနိုင်ရင်အလကားပါပဲ….. ငွေကြေးချမ်းသာပြီး အတ္တတွေကြီးကာကိုယ့်အိတ်ထဲပဲ ထည့်ဖို့ ကြိုးစားနေရင်လည်းအလကားပါပဲ…. အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက်မြင့်မြင့်စာနာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသား မရှိရင်အလကားပါပဲ…. ရုပ်ရည် ဘယ်လောက်ချောချောလူတစ်ယောက်ကို လူလို့ မမြင်တတ်ရင်အလကားပါပဲ…. အသိပညာ […]
စဥ့်ကိုင်မြို့နယ် ဘဲလင်း အထပ်သားစက် ရုံမီးလောင် …..
Breaking_News မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင် စဥ့်ကိုင်မြို့နယ် ဘဲလင်းအထပ်သားစက်ရုံမီးလောင်၍ ကျောက်ဆည်မှမီးသတ်ယာဉ် နှစ်စီး ရေသယ်ယာဉ်တစ်စီးထွက်ခွာငြိမ်းသတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ကနဦး သိရှိရသည်။ မန္တလေးအကူယာဉ်များလာရောက်နေကြာင်း သိရသည်။ ကျောက်ဆည်မီးသတ်ဦးစီးဌာန credit Myanmar Online News unicode version Breaking_News မတျလ (၁၁) […]